Permalink Reply by zaw aung on June 16, 2012 at 20:48
thank u very much sir. i can explain my daughter clearly now.
Permalink Reply by Ma Phyo Mon Than on June 18, 2012 at 14:04
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့လည်း ဒီသင်ခန်းစာက အားဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.......
အစကတော့လေ englishမှာ speaking နဲ့ writing ကိုေ၀၀ါးနေတယ်
Permalink Reply by သက်တန့်အောင် on June 22, 2012 at 15:30
Permalink Reply by Aye Myint Soe on June 22, 2012 at 16:25
Permalink Reply by Khaung Long on July 4, 2012 at 10:49
အရမ်းကြိုက်တယ်ဗျာ အထူးသဖြင့် လေယူလေသိမ်းပြောတဲ့ အခါမှာ အင်္ဂလိုမတူရင်နေပါစေ သူတို့နားလည်ရင်ပြီးရောပေါ့
စကားပြောတာသူနားလည်ကိုယ်နားလည်ဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ် အဲဒါကို မတူတူအောင်ကျင့်တော့ အစ်ကိုပြောသလို နားခါးတယ်
ဗမာမှာတောင်မှ အောက်ပြည် နဲ့ အထက်ပြည်လေသံမတူဘူးဗျ ရန်ကုန်စကားနဲ့ မော်လမြိုင်စကားတောင်ကွာသေးတာပဲ
Permalink Reply by Thet Paing Hmue on October 2, 2012 at 9:17
Permalink Reply by thant zin tun on October 11, 2012 at 9:58
Permalink Reply by Khaing Zar Min on September 26, 2013 at 16:00
Permalink Reply by Cindy on September 26, 2013 at 19:06
Encouraging mealot :D
Permalink Reply by Pethet Naung on September 27, 2013 at 16:50
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ... အချိန်ရရင် ဆက်ရေးပါအုံး ဆရာ...
Permalink Reply by aungnaingthu on October 27, 2014 at 16:01
Permalink Reply by thuzar on March 2, 2015 at 14:47
အခုလို လေ့လာရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။ လိုအပ်လျှင် အသံထွက်ကောင်းအောင်၊ အသံထွက်မှန်ကန်အောင် ဘယ်လိုအချက်တွေကို လေ့လာဖို့ လိုလည်းဆိုတာကိုလည်း သိချင်ပါတယ်။ လေးစားစွာဖြင့်